माचन्डको शक्ति प्रदर्शनः अदालत र निर्वाचन आयोगलाई थम्की – सगरमाथा खबर
माचन्डको शक्ति प्रदर्शनः अदालत र निर्वाचन आयोगलाई थम्की
नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका नेताले अदालत र निर्वाचन आयोगलाइ -आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिएका -छन् । बुधबारको आमसभामा बोल्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनप्रदर्शनले अदालतलाई फैसला गर्न सहज हुने बताए ।
यतिबेला सत्ताधारी नेकपा र सडक संघर्षमा रहेको नेकपाबीच जनप्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा छ । दाहाल-नेपाल पक्षको माघ ९ गतेको प्रदर्शनविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ गते आमसभा गरे । त्यही २३ गतेका विरुद्ध फेरि बुधबार पभशच- माधव समूहले कार्यकर्ता उतारे ।
बुधबारको प्रदर्शन आह्वान प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध थियो । तर यो प्रदर्शनको अन्तर्य त्योभन्दा फरक देखियो । सम्बोधनको क्रममा नेताहरुले भनेजस्तै पार्टीको आधिकारिकता र ओलीको कदमका विषयमा विचाराधीन मुद्दामा सम्बन्धित निकायमाथि दबाब बढाउनु देखिन्थ्यो ।
नेकपा आधिकारिताको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सेटिङ’ रहेकोमा सशंकित रहेको यो समूहले बुधबार मञ्चबाटै दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गर्‍यो । उक्त समूहका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले मात्रै होइन, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत् अदालत र आयोगमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरेका छन् ।
नेकपा दाहाल-माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाका पक्षमा अदालतले फैसला नगरे आँधीहुरी नै आउने बताए । उनले अप्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च अदालतमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरे । प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाका पक्षमा निर्णय नआए ‘ग्रिन रिभोलुसन’ हुने उनको भनाइ थियो ।
‘तपाईंहरू ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा निर्णय दिनुहुनेछ’, उनको भनाइ थियो । जसको अर्थ प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने निर्णय हुन्छ । त्यसपछि उनले घुमाउरो रुपमा चेतावनी दिए, ‘जनताको आकांक्षा विपरीत केही काम गरियो भने राम्रो हुँदैन । यो विद्रोहमा परिणत भयो भने के हुन्छ ?’
यदि लोकतन्त्र (प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना)को पक्षमा निर्णय नभए आँधीहुरी आउने चेतावनी उनले दिए । यसक्रममा दाहलले थपे, ‘त्यसो भएन भने आँधी आउँछ। हुरी आउँछ । हिजो सानो समूह (माओवादी)ले विद्रोह गर्दा के भयो? आज जनताले गर्दैछन्। ’
न्यायाधीशले ओलीको सनकको भरमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षमा फैसला गर्छन् भनेर आफूले नपत्याएको समेत उनले बता ए।
आफूले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि दिएको अभिव्यक्तिमा मानहानी मुद्दा लाग्नेमा समेत सचेत रहँदै उनले फेरि थपे, ‘मैले यस्तो बोल्दा अपमान भयो भन्छन् । हाम्रो भरोसा छ। गर्ने त्यही हो । छिटो गर । काइते कुराको पछि नलाग । ठगी धन्दाको पछि नलाग भनेको हो ।’
निर्वाचन आयोगमाथि शंकैशंका
दाहालले निर्वाचन आयोगमाथि पनि शंका व्यक्त गरे । आयोगको लक्षण राम्रो नदेखिएको बताए । आयोगलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धम्की दिएको भन्दै कसैको डर र धम्कीको भरमा आयोगले खुट्टा कमाउन नहुनेमा जोड दिए । उनले आयोगका केही व्यक्तिको भूमिकाप्रति शंका लागेको बताए ।
‘केपी ओलीले आयोगमा गएर धम्क्याउनु भएछ र निर्वाचन आयोगचाहिँ अलिकति, आयोगका कोही-कोही मान्छे चाहिँ फेरि के हो के हो, अहिले बढी नबोलौं हैन । भन्यो भने फेरि बिग्रने हो कि ! तर, निर्वाचन आयोगको लक्षण गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है,’ उनको भनाइ थियो, ‘निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ । काइते कुराको पछाडि नलाग भन्या न हो हामीले। ठगी धन्दाको पछाडि लाग्ने ? निरंकुशताको पछाडि लाग्ने ?’
दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगमा पुगेर धम्की दिएको भन्दै कसैको डर र धम्कीको भरमा आयोगले खुट्टा कमाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनले आयोगका केही व्यक्तिको भूमिकाप्रति शंका लागेको बताए ।
संसद पुनःस्थापना कि निर्वाचनको पक्षमा कांग्रेस ?
आन्तरिक तथा बाह्य उडान बन्दः भारतमा दुई उडान हुने
१ नम्बर प्रदेशको अधिवेशन जेठ २४ मा बोलाउन सिफारिस
केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
संसद् विघटन विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला आज आउन सक्ने
उदयपुरमा स्कारपिओ दुर्घटना: ५ जनाको मृत्यु, ३ घाइते